Sisiphi Isizathu Esiphambili Sokuthi Sinokukufumana Njani Nendlela Yokuyifumana
Siye sabona yonke imbono engundoqo kwimigangatho yokufunda ukuqonda, kodwa ngamanye amaxesha, loo mibuzo ilukhuni ukuphendula, ngakumbi ukuba awuqinisekanga ngokupheleleyo ukuba uyayiqonda into eyona nto ingundoqo . Kodwa ekufumaneni ingcamango ephambili yomhlathi okanye ixesha elide lokubhaliweyo, kunye nokwenza ingcaciso , ukufumana injongo yombhali , okanye ukuqonda amagama amagama kwisigcawu, enye yezakhono zokufunda ezibalulekileyo ukuqonda.
Ukwenza njalo kuya kukunceda ukuba uphumelele kwicandelo lokuqonda lokufunda kovavanyo lwakho olulandelayo olufanelekileyo. Ukuqonda ukuba yintoni imbono ephambili kwaye ulandele amanyathelo ambalwa alula anokukunceda ufunde ukuyifumanisa.
Yiyiphi imbono ephambili?
Ingcamango ephambili yomhlathi yiyona ngongoma yesahluko, nciphise zonke iinkcukacha. Ingongoma ephambili okanye imbono yokuba umbhali ufuna ukuthetha nabafundi malunga nesihloko. Ngenxa yoko, kumhlathi, xa ingcamango ephambili ichazwe ngokuthe ngqo, ichazwe kwizinto ezibizwa ngokuba sisivakalisi sesihloko . Inika ingcamango ebalulekileyo yintoni umhlathi uchaphazelekayo kwaye ixhaswa yiinkcukacha kumhlathi. Kwinqaku lemihlathi emininzi, imbono ephambili iboniswe kwisitatimende sesingci .
Ingcamango ephambili yinto oxelela umntu xa bebuza into oyenzayo ngeveki ephelileyo. Ungatsho into enje, "Ndaya kwintengiso," kunokuthi, "Ndiye emotweni yam kwaye ndiqhubela kumashishini.
Emva kokuba ndifumene indawo yokupaka kufuphi nomnyango omkhulu, ndangena ngaphakathi ndafumana ikhofi e-Starbucks. Emva koko, ndaya kwiindawo ezincinci zeentambo zokukhangela ukukhangela ibhola elitsha ukugqoka iiveki ezayo xa sifikela elunxwemeni. Ndawafumana e-Aldo, kodwa ke ndazama ngeemputshane ngeyure elandelayo kuba ndaqonda ukuba yam yayincinane kakhulu. "
Ingcamango ephambili imfutshane, kodwa isishwankathelo sonke. Ihlanganisa yonke into umhlathi ukhuluma ngayo ngendlela epheleleyo, kodwa ayifaki inkcukacha.
Xa umbhali engayithethi ngcamango ephambili ngokuthe ngqo, kufuneka isacacisiwe , kwaye ibizwa ngokuba yingcamango ebalulekileyo. Oku kufuna ukuba umfundi ukhangele ngokungqalileyo kumxholo - ngamagama athile, izivakalisi, imifanekiso esetyenzisiweyo nokuphindaphindiweyo-ukuqonda oko umbhali othethayo. Oku kunokuthatha inzame encinane kwinxalenye yomfundi.
Ukufumana ingcamango ephambili kubalulekile ukuqonda oko ufundayo. Inceda iinkcukacha zenza ingqiqo kwaye zibalulekile, kwaye inika isakhelo sokukhumbula umxholo.
Funda ivesi ngokugqibeleleyo, ngoko uzama ukubona isihloko. Ngubani okanye umhlathi?
Emva kokufunda le ndinyana ngokucokisekileyo, shwa nkathela ngamazwi akho kwisigwebo esisodwa esibandakanya isicaciso seengcamango zonke ezivela kumhlathi. Indlela enhle yokwenza oku kukuzenza ngathi unamazwi alishumi kuphela ukuxelela umntu oko kuthethwa ngendinyana.
Khangela izivakalisi zokuQala kunye zokugqibela zeSigcawu
Abalobi bahlala bebeka ingcamango ephambili okanye kufuphi naso kwisivakalisi sokuqala okanye sokugqibela somhlathi okanye inqaku.
Qinisekisa ukuba ngaba enye yezi zivakalisi zibamba ingcamango ephambili. Ngamanye amaxesha, nangona kunjalo, umbhali uya kusebenzisa oko kuthiwa ukuguqulwa kwesigwebo kwisigwebo sesibini - amagama anjengeko ke , nangona kunjalo , ngokuchaseneyo , nangona kunjalo , njl. -thi ibonisa ukuba isivakalisi sesibini yimbono ephambili. Ukuba ubona elinye lala magama awanelisekanga okanye afanelekele isivakalisi sokuqala, oko kuyisicaciso sokuba isivakalisi sesibini siyinqobo.
Khangela ukuphindaphinda kweengcamango
Ukuba ufunda umhlathi kwaye awunayo ingcamango yokuba uyifingqa njani ngokuba kukho ulwazi oluninzi, qalisa ukukhangela amagama aphindaphindiwe, amabinzana, iingcamango okanye iingcinga ezifanayo. Funda umhlathi umzekelo:
Isixhobo esitsha sokuva sisebenzisa umbane ukugcina isahluko sokucoca isandi esicacileyo. Njengamanye amancedo, iguqula isandi sibe ngongoma. Kodwa iyingqayizivele kuba iyakwazi ukudlulisela izibilini ngokukhawuleza kumagnet uze ube neendlebe zangaphakathi. Oku kuvelisa isandi esicacileyo. Isixhobo esitsha asiyi kunceda bonke abantu abanokukhubazeka-kuphela abo banokulahlekelwa kwindlebe ekubangelwa usulelo okanye enye ingxaki kwiindlebe eziphakathi. Kuya kusinceda ungekho ngaphezu kweepesenti ezingama-20 zabantu bonke abaneengxaki zokuva. Abo bantu abanezifo ezithe gqolo zendlebe, nangona kunjalo, kufuneka bafumane ukukhulula kunye nokubuyiselwa kweso sixhobo esitsha.
Yiyiphi imbono esi siqendu ngokuphindaphindiweyo? Isixhobo esitsha sokuva. Iyiphi imbono malunga nale ngcamango? Isixhobo esitsha sokuva siyafumaneka kubantu abathile abanokuva. Kwaye kukho ingcamango ephambili.
Gwema Iingcamango eziphambili
Ukukhetha ingcamango ephambili evela kwisethi yempendulo yeempendulo kuyahluke kunokuqulunqa ingcamango eyintloko. Ababhali beemvavanyo ezininzi ezikhethiweyo bahlala bekhohlisayo kwaye baya kukunika imibuzo yokuphazamisa ezwakala ngathi impendulo yangempela. Xa ufunda isicatshulwa ngokugqibeleleyo, usebenzisa izakhono zakho, kwaye ufumanisa ingcamango eyintloko, kodwa unokuphepha ukuzenza ezi mpazamo ezi- 3 eziqhelekileyo - 1) ukhetha impendulo encinci kummandla; 2) ukhetha impendulo eninzi kakhulu; 3) okanye ukhethe impendulo enzima kodwa ephikisana nengcamango ephambili.
Ukufumana ingcamango ephambili inokuba ngumngeni, kodwa ukuba usebenzisa izixhobo ezingasentla kwaye uziqhelise, uya kuhamba ngendlela yakho ukuya kumanqaku oyifunayo kumacandelo okuthetha okanye okufundela iimvavanyo eziqhelekileyo.
Izixhobo kunye nokuFunda okuqhubekayo
> Indlela yokufumana Iingcamango eziPhambili eziPhambili
> Indlela Yokufumana Iingcamango Ezingundoqo
> Ukufumana iMbono ephambili yokuSebenza
> Ukufumana iingcinga eziphambili kumhlathi, http://english.glendale.cc.ca.us/topic.html
> Ukufumana iMbono Eyona Nkulu , College College, http://www.ccis.edu/offices/academicresources/writingcenter/studyskills/textbookreadingstrategies/findingthemainidea.aspx
Ukuhlaziywa nguLisa Marder
IShedyuli yoFundo lweeNtsuku zoThutho zoThutho
Iingoma eziphezulu zikaMichael Jackson ze-80s, Ingxenye 2
Yintoni eyabangela iiProthets zeTanananmen Square?
Imfazwe Yeminyaka Yesixhenxe: Imfazwe yaseQuiberon Bay
Amadoda aseGymnasts abanikezelayo Ngama-Olimpiki ase-Rio i-2016
Pointe Izicathulo Iinkonzo - Yenza iifolothi zakho
UEhudi - Umbulali ka-Eglon
Kutheni Ufuna Ukutshintsha 'Ilizwe Lakho' usebenzisa 'i-Por'?
Indlela yokuphucula izikolo zeGolf kunye nokudlala
Ngaba Kukhuselekile Ukusela Amanzi Awenziweyo?
Iingxaki zeZibhalo zeMatriki zeKrisimesi zeBakala lesiBini
Imfazwe Yehlabathi II: Imfazwe yase-Wake Island
Ukuqhekeza ukulala: Ukukhusela okuqhelekileyo